अवधारणामा ढिलाइको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दु | प्रार्थना अंकहरू
आइतवार, सेप्टेम्बर 19, 2021
घर प्रार्थना अवधारणामा ढिलाइको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दु
अवधारणामा ढिलाइको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दु
आज हामी धारणाको ढिलाइको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दुको साथ व्यवहार गर्ने छौं। यो पृथ्वी को सतह गुणा र कब्जा गर्न को लागी परमेश्वरको योजना छ। याद गर्नुहोस् जब येशू आएर निर्देशन दिनुहुन्थ्यो कि म नआउन्जेल, ख्रीष्टले कुरा गरिरहनु भएको एउटा कुरा भनेको संसारलाई आफ्नो वशमा पार्नु हो, मानिस पृथ्वीको सम्पूर्ण सतहमा बास गर्नु हो। तर कसरी आउनेछ जब तपाईं बच्चा गर्भधारण गर्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? बाँझपन तपाईको जीवनको लागि कहिले पनि परमेश्वरको योजना हुँदैन। वास्तवमा शत्रुले यो गरेको छ, भगवानले होइन। अवधारणामा ढिलाइले महिलामा दबाब दिन्छ; यद्यपि दुबै पुरुष र महिलालाई दबाब दिइने छ, दबाबको ठूलो हिस्सा महिलामा चल्नेछ।
तपाईंको गर्भ गर्भधारणको लागि परमेश्वरले बनाउनुभएको छ र आशीर्वाद दिनुभएको छ। यो सजावटको लागि मात्र होईन। त्यहाँ कोही मानिसहरु छन् जसको गर्भलाई अन्धकारको हातले छोएको छ, र यसैले तिनीहरुका लागि गर्भधारण गर्नु धेरै नै गाह्रो छ, र जब एक महिला गर्भधारण गर्न असमर्थ हुन्छ, यसको मतलब महिला सम्पूर्ण जीवन निःसन्तान रहन्छ। को पुस्तक मा भजन 113: 9, धर्मशास्त्रले भने उसले बाँझी स्त्रीलाई घर दिन्छे र छोरीको आनन्दित आमा बनाउँछ। परमप्रभुको प्रशंसा गर! बाइबलले घरलाई बुझाउँदैन भनेको गर्भको फल हो। यसले भगवानले कसैलाई बाँझोपनले विश्राम दिनुहुने छैन भनेर वर्णन गरिएको छ।
हन्ना धेरै बर्षे बाँझी रहिन् र वर्षौंसम्म उनी गर्भवती हुन सकिनन्, तर एक दिन उनी शीलो गइन् र आफ्नो गर्भ खोलेर एउटी आमा बनाइदिन परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिन्। परमेश्‍वरले हन्नाको प्रार्थना सुन्नुभयो र उनलाई एउटा बच्चाले आशिष् दिनुभयो। आज पनि, येशूको नाममा आज परमेश्वर तपाईंको पुकार सुन्नुहुनेछ। यो तपाईंको शिलोह हो, र यो तपाईंको आमा बन्ने समय हो। म स्वर्गको लिलामीबाट आदेश दिन्छु, अन्धकारको हरेक शक्ति जसले तपाईको कल्पना गर्न असम्भव बनाएको छ, त्यस्ता शक्तिहरूलाई पवित्र आत्माको आगोले भगाउँछु।
यस प्रार्थना गाईडको माध्यमबाट भगवानले अचम्मका कामहरू गर्नुहुनेछ, यदि केवल तपाईंले विश्वास गर्नुहुन्छ भने। यदि भगवानले केही निर्देशन गर्नुभएको छ भने, त्यसले त्यो गर्‍यो किनभने ऊ झूट बोल्ने मानिस होइन। न त उनी पश्चाताप गर्ने मानिसका छोरा हुन्। जब तपाईं यो प्रार्थना गाइड प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ, म प्रार्थना गर्छु कि भगवानले तपाईंको बिन्तीको आवाज सुन्नुभयो र तपाईंको मनको इच्छा अनुसार तपाईंलाई दिनुहोस्।
भगवान भगवान, मलाई महिला बनाउन को लागी म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, मलाई जन्मको प्रजातिमा सृष्टि गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु, अर्को जन्ममा पनि, म तपाईंको पवित्र नामको स्तुति गर्दछु। हे प्रभु, यो तपाईंको योजना हो कि हामी पृथ्वीलाई गुणा गर्दछौं, र त्यसैले तपाईं हामीलाई बाँझोपनका साथ कहिल्यै प्रयास गर्नुहुने छैन; प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंको कृपामा मेरो गर्भ खोलिदिनुहोस् र येशूको नाममा मलाई गर्भधारण गर्नुहोस्।
म मेरो जीवनमा अवधारणामा ढिलाइको हर प्रकारको बिरूद्ध आउँछु। मेरो गर्भमा गर्भधारण गर्न ढिलाइ गर्ने हरेक शक्ति र रियासतहरू येशूका नाममा मर्छन् र मर्छन्।
हे प्रभु, तपाईंको वचन भजन १२128: & र of को पुस्तकमा लेखिएको छ, तपाईंको पत्नी तपाईंको घरमा फलफूलको बोटझैं हुनेछ। तिम्रा छोरा छोरीहरु तिम्रो टेबल वरिपरिको भद्राक्ष पारी जस्तै हुनेछन्। हेर, यसरी मानिस प्रभु डर जो आशिष् गरिनेछ। तपाईंले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म फलदायी हुनेछु, म जीवनमा मेरो फल फलाउने हरेक शक्तिको बिरूद्ध आउँछु, मलाई शक्तिवान हुनबाट रोक्न चाहने हरेक शक्ति, येशूको नाममा नष्ट होस्।
हे प्रभु, जसरी तपाईंले रिबेकाको बारेमा इसहाकको प्रार्थना सुन्नुभयो र उनको बाँझापन हटाउनुभयो, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तिमी येशूको नाममा मेरो जीवनमा बाँझोपनको जुवालाई नाश गर्नेछौ। किनकि धर्मशास्त्रले भन्छ, केटाकेटीहरू परमेश्वरको सम्पदा हुन्, म आदेश दिन्छु कि म येशूको नाममा फल फलाउँनेछु।
मेरो गर्भको फल बाहिर प्रत्येक शक्ति चूसने, येशूको नाममा मृत्यु। अन्धकारको राज्यमा गर्भमा रहेको अन्धकारको हरेक शक्ति येशूको नाममा मृत्युमा पसे। म मेरो गर्भको अंन्धकारको अन्धकारबाट बाहिर निकाल्छु। म तिनीहरूलाई येशूको नाममा स्वतन्त्र।
म हरेक दुष्ट आँखालाई अन्धा तुल्याउँछु जुन मेरो जीवनको अनुगमन गर्न र अन्धकारको राज्यमा फिर्ता रिपोर्ट दिन खटाइएको छ, त्यस्ता आँखाले येशूको नाममा मलाई देख्न नदेऊ।
प्रभु येशू, म दयाको लागि प्रार्थना गर्दछु। यदि मेरो जीवनमा कुनै पाप वा अधर्म छ जसले गर्भधारणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने, म तपाईंलाई येशूका नाममा माफ गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। कलवरीको क्रूसमा बगाइएको रगतको आधारमा, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले येशूका नाममा मेरो पाप र अधर्म हटाउनुहुनेछ।
प्रभु, म मेरो जीवन मा अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर्दछु। विगतमा मैले गरेका प्रत्येक अनैतिक कार्यहरू जुन शत्रुले मेरो विरुद्धमा मेरो अवधारणा ढिलाइ गर्न प्रयोग गरिरहेको छ, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईं येशूको नाममा त्यस्तो अनैतिकता हटाउनुहोस्। किनकि धर्मशास्त्र भन्छ, किनकि हामीमा प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्न जसलाई हाम्रा कमजोरीहरूको भावनाले छुनु हुँदैन। त्यसकारण आउनुहोस्, साहसपूर्वक अनुग्रहको सिंहासनमा हामी कृपा पाउन सक्छौं। प्रभु, म आज तपाईंको सिंहासनमा आएको छु, येशूको नाममा मलाई कृपा प्रदान गर्नुहोस्।
हे प्रभु, तपाईंको वचनले तपाईंलाई भन्दछ कि तपाईंले मेरो बारेमा भएका योजनाहरू जान्नुहुन्छ, तिनीहरू असलको योजना हो र न कि खराबको योजनाले मलाई अपेक्षित अन्त्य दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु कि मेरो जीवन र विवाहको लागि तपाईंको योजना र एजेन्डा येशूको नाममा प्रकट हुन सुरू गर्नुहोस्। मैले मेरो जीवनमा ख्रीष्टको रगतद्वारा गर्व गर्नमा ढिलाइको जुवा भाँचेको छु।
म अधिकारबाट आदेश दिन्छु, अनुग्रहको सिंहासनबाट बच्चाहरूको धारा मेरो गर्भमा आज येशूको नाममा बग्दछ। जसरी तपाईंले हन्नालाई आमा बन्नुभयो जस्तो तपाईंले राहेलको प्रार्थनाको जवाफ पाउनुभयो, आज मेरो प्रभुको प्रार्थना सुन्नुहोस् र येशूको नाममा मेरो हृदयको इच्छा अनुसार मलाई दिनुहोस्।
अवधारणामा ढिलाइको बिरूद्ध प्रार्थना
अघिल्लो लेखमाप्रार्थना ढोका ढोकाको बिन्दुमा
अर्को लेखमाप्रार्थना अवरोधको बिरूद्ध अंक
आध्यात्मिक युद्ध मा प्रार्थना गर्ने पाँच तरिका
भगवान को अलौकिक नेतृत्व कसरी पहुँच गर्ने
सुरक्षा को लागी 30 बाइबल पदहरु
सेप्टेम्बर 11, 2021
Delण छुटकाराको लागि प्रार्थना
अगस्ट 4, 2020
१० बाइबल पद माफी को लागी प्रार्थना गर्दा बिर्सनु हुदैन
सुसमाचारका लागि सताइएकाहरूको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
२० साथीको लागि स्वास्थ्य लाभको लागि शक्तिशाली प्रार्थना
फेब्रुअरी 11, 2019